गरिबी , बेरोजगारी र लामो लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट हैरान नेपाली जनतालाई सरकारले मुलुकमा समृद्धि र विकासको लागि विकल्पहीन अबस्थामा जनताले नेपाली कम्युनिस्टहरुलाई सरकारको चाबी सुम्पिएका छन् । तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर बनेको सरकार अंकगणितीय रूपमा जति शक्तिशाली छ, समृद्धिको रफ्तार कछुवाको गतिमा सीमित छ । भनिन्छ ‘मर्निग शोज दि डे’ । के यो सरकारले बैचारिक आधारमा समृद्धिको खाका कोर्न सक्ला ? के यो सरकार नेपाली कांग्रेस भन्दा भिन्न होला ? या यो सरकारलाई बिस्वास गर्न सक्ने आधार के छ ?
अक्टोबर क्रान्तिको त्यो किस्सा !
सन् १९०५को ग्रीष्मऋतुमा इभानोबो (भोज्नेसेन्स्कका मजदुरहरूले सबभन्दा पहिले मजदुर प्रतिनिधि सोभियत गठन गरेका थिए । यो नै कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापनाको सुरुवाती थियो । देशका अरु औद्योगिक केन्द्रहरूका मजदुरहरूले पनि यस उदाहरणको अनुसरण गरे ।
जारशाही विरुद्धको संघर्षमा किसान वर्ग पनि सरिक भयो, जसले भूमिपतिहरूको जग्गाजमीन जनतामा वितरण गरियोस् भन्ने माग राखेको थियो । सोही वर्ष अक्टोबरमा अखिल रसियाली राजनैतिक हड्तालको घोषणा गरियो । देशभरि जता जतै कलकारखानाहरूमा काम रोकियो,रेलका डब्बाहरू बीच वाटैमा अडिए । यस साधारण हड्तालले मजदुरवर्गको अतुलनीय शक्तिको प्रदर्शन गरिदियो । १७ अक्टोबरको दिन जारले एउट घोषणापत्र प्रकाशित गर्न बाध्य हुनु प¥यो । बिडम्बना, जारले आफ्नो बाचाबन्धन पूरा गर्दै गरेन । सन् १९०५ को डीसम्बर महिनामा मास्कोमा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो ।
सामाजिक–प्रजातन्त्रवादीहरू तथा बोल्सेभिकहरूले आन्दोलको नेतृत्व गरे । र पछि, सन् १९०६ को हड्तालहरूमा १० लाखभन्दा बढी मजदुरहरूले भाग लिए । सन् १९०६को पूर्वाधमा किसान आन्दोलन पनि आधाभन्दा बढी अञ्चलहरूमा फैलिएको थियो । तर प्रथम रुसी क्रान्ति असफल रह्यो । तर फेरी रुसमा सन् १९१७ फेब्रअरीमा दोस्रो ठूलो जनआन्दोलन भयो ।
त्यस आन्दोलनमा महिला, मजदुर, बिद्यार्थीलगायत बिभिन्न तप्काका जनताहरु जारशाहीबिरुद्ध सडकमा उत्रे । राजधानी पेट्रोगार्ड आन्दोलनको केन्द्र थियो । थुप्रै सेनाहरुले पनि जारशाहीबिरुद्धको आन्दोलनलाई साथ दिए । अन्ततः त्यही आन्दोलनले जारशाही सत्ताच्यूत हुन पुग्यो । आन्दोलनलाई थेग्न नसकेपछि जार निकोलस द्वितीयले गद्दी त्यागे । यसरी ३ सय वर्ष पुरानो जारशाही शासनको अन्त्य हुन पुग्यो ।
जारशाही शासनको अन्त्यपछि रुसको राजनीतिक सामाजिक स्थिति झन् तरल हुन पुग्यो । देशमा जताततै अराजकताको स्थिति बन्यो । जार निकोलस द्वितीयले गद्दी त्यागेपछि राजकुमार जियोर्जी एलभोभको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन हुन्छ । तर, त्यसले मुलुकको बिग्रँदो स्थितिलाई सम्हाल्न सकेन । राजकुमार एलभोभ ५ महिनापछाडि नै पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि जुलाई महिनामा रुसी समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टीका नेता अलेक्जेण्डर केरेन्स्की प्रधानमन्त्री बने ।
पछि, लेनिनले रुसलाई समाजवादी क्रान्ति साम्यवादको बाटोमा लान सम्भव नहुने निस्कर्ष निकाले । उक्त परिस्थितिको बीच अन्तरिम सरकारले सन् १९१४ बाट सुरु भएको विश्वयुद्धमा रुसको सहभागितालाई पुनःजोड्ने घोषणा गर्यो । रुसी जनता र सेना युद्ध चाहँदैनन् भन्ने कुरा लेनिनलाई राम्ररी नै थाहा थियो । र, लेनिनले जनताको यही मानसिकतालाई क्रान्तिको पक्षमा मोड्ने गरे । लेनिन र बोल्शविक पार्टी तुरुन्तै विश्वयुद्धमा पुनः सेना परिचालन गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको खिलाफमा उत्रे । यसले आम मजदुर, सेना र सर्वसाधारणहरुको ठूलो हिस्सा तुरुन्त नै वोल्शेविकहरुको पक्षमा आकर्षित भए । उनीहरु बोल्शेविकहरुले गर्ने क्रान्तिमा सामेल हुने मनस्थितिमा आइपुगे ।
ठीक त्यहि गुरु मन्त्र थापेर नेपालमा धेरै आन्दोलन र राजनैतिक बलिदानी भए । हजारौ बीर सहिदहरुले प्राणको आहुति दिएका छन् । सबै आन्दोलनको मूल मर्म विकास र समृद्धि नै थिए ।
समय बदलियो , परिस्थिति बदलिए , बिस्व राजनीति सुन्य बाट सुरु भै आर्थिक रुपमा छलांग मारी सकेका छन् । तर नेपालमा भने विभिन्न वादको रुपमा भ्रस्टाचार , गरिबी , चरम बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । रुसमा भएको क्रान्तिलाई बैचारिक च्याखे थापेर आएकाहरु देसको बागडोर सम्हालेका छन् । उनीहरुको परिस्थिति फेरियो , मुलुक र जनताको अबश्था भने ज्युँ को त्यूँ छ ।
अहिले नेपालमा जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक नेताहरूबाट असल शासनको चाहना गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तन गर्दा केवल विचार र सिद्धान्तलाई आधार नबनाई काम गर्ने शैलीलाई जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले ओली सरकारले कुशासन खासगरी भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ स्थायी सरकार मार्फत विकास र सम्वृद्धिको नारा दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । बहुसंख्यक जनताको आर्थिक अवस्था र उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउन असफल भएको पूर्व कांग्रेसी सरकारको अकर्मण्यताको फाइदा नयाँ सरकारलाई छ ।
कुशासनले गर्दा प्रजातन्त्रको जग पनि बस्न नसकेको अवस्थामा जनताले कुनै उपाय नदेखेर वैकल्पिक पार्टी र नेतालाई सत्तामा त र्पुयाउँछन् । तर उनीहरूले चाहेजस्तो परिवर्तन भने आउन सक्दैन । सत्तामा आएपछि नयाँ अनुहारले पनि पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन्छन् । र पुनः जनता सधैं अन्याय र असमानतापूर्ण व्यवस्थामा रहिरहन बाध्य हुन्छन् ।
नेपालका वर्तमान सरकारले बुझ्न पर्छ कि अब ठुला ठुला भाषण गर्ने जमाना गए । जनता परिणाम हेर्न चाहन्छन् र यदि उनीहरूले चाहेअनुसारको परिवर्तन नआएमा उनीहरूको प्रजातन्त्रमाथिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जान्छ । र त्यसको फाइदा तेस्रो पक्षले लिन सक्छ । संसारमा जनताको चाहना अनुसार सासक नचल्दा धेरै राजनैतिक परिबर्तन भएका छन् ।
ठिक त्यस्तै, नेपालको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्टहरु सत्तामा भएकाले यो सरकारले जनताको चाहना अनुसार कार्य गर्न नसके र पुरानै सैलिमा झैँ भ्रस्टाचार र कुसासन अन्त्य नभए जनताको वामपन्थी विचारधाराप्रतिको आस्था र विश्वास पनि कम हुँदै जानेछ । कुरा मात्रैले अब उम्किन सकिने अबस्था छैन। यदि यो सरकार असफल भए नेपाली जनताले विकल्प खोज्न बाध्य हुने निश्चित प्राय नै छ ।
जब जब देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ र तब धनाड्य हरु झनै धनाड्य बन्दै जान्छन र गरिब झनै कंगाल । र निस्कर्सामा जनताले प्रजातन्त्र भनेको धनीहरूका लागि मात्रै हो भन्ने भाव मौलौदै जान्छ । र जनताको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जान्छ । अहिले नेपालकै सन्दर्भमा आज पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि सरकारले कुनै पनि उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी घेरामा ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा सरकारको सत्रु भ्रस्टाचार र कुससन नै हो ।
नेपालको पहिलो बहुमतको सरकार वीपी कोइरालाले बनाएका थिए । उनले पनि चीनसँग ‘अनावश्यक हिमचिम’ बढाएका थिए, नेपाललाई सार्वभौम र आत्मनिर्भर बनाउन खोजेका थिए । उता दरबार अर्थात् राजा महेन्द्र थिए । भारत र राजाको कोपभाजनको शिकार बनेर असमयमै वीपी सरकार मात्र होइन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै ढालियो । तर वर्तमान सरकार बि पी को अबस्थामा छैन ।
०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकार बन्यो । उनले आफ्नो बुद्दि बिगारे । असमयमै मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेर पूरा अवधी प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने अवसर गुमाए । त्यसबेला कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह सिर्जना भएको थियो । आन्तरिक कलहको शिकार बन्यो बहुमतको सरकार ।
त्यसकारण , अहिलेको अबस्थामा समय फेरिएको छ , ब्यबस्था बदलिएको छ । सरकारसंग ५ वर्ष सम्म स्थायी रुपमा कम गर्ने जनमत छ । यस प्रकारको अबस्थामा सरकारले अब काम गर्न नसक्नु पर्ने कुनै पनि कारण हुने छैन । र एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर ओली सरकार उम्कन सक्दैन ।
अन्यथा , मुलुक नया विकल्पमा जान बाध्य हुने छ ।